Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday heshiis horumarineed. – Radio Daljir
Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday heshiis horumarineed.
Seteembar 22, 2011 12:00 b 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali oo ka qeybgalaya shirkii guud ee Qaramada Midoobey ee sanadlaha ahaa ayaa la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Talyaaniga Franco Frattini oo ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin amniga, gar-gaarka bani’aadanimo iyo arrimaha siyaasadda.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Talyaaniga Franco Frattini waxey kala saxiixdeen heshiis horumarineed oo ay dowladda Talyaaniga ku fasaxeyso lacago ilaa 14, 956, 919 Euro ah (ku dhowaad 15 million euro) oo la xiriirtay heshiis ay labada dowlad horey u kala saxiixdeen 26kii November 1988 oo ku aadanaa inay Dowladda Talyaaniga siin doono deeq Dowladda Soomaaliya oo la xiriirtay dhiiri gelin waxsoosaarka dalka Soomaaliya. Heshiiskan waxuu oggolaanayaa in Dowladda Talyaaniga ay ku wareejineyso lacagtaas Dowladda Soomaaliya si loogu isticmaalo arrimaha horumarinta sida waxbarashada, biyo-gelinta, caafimaadka, beeraha iyo xanaanada xoolaha iwm.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Talyaaniga Franco Frattini oo ka hadlay kulanka iyo shir-jaraa’id oo ay si wadajir ah u wada qabteen ayaa sheegay in Dowladda Talyaaniga ay ka go’antahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, isla markaana loo saacidi lahaa sidii dowladda ay u hirgelin laheyd mashaariicda muhiimka u ah shacabka soomaaliyeed. Sidoo kale Wasiirka waxuu uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha horumarka laga sameeyey dhanka amniga, dib-u-heshiisiinta iyo siyaaasadda ee Soomaaliya oo uu sheegay inay diyaar u yihiin inay sii waddaan caawinaada dowladda Soomaaliya. Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Talyaaniga ayaa casuumaad rasmi ah u fidiyey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya si u soo booqdo Talyaaniga isla markaana uu ula kulmo Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Silvio Berlusconi.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali ayaa u mahadceliyey Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Talyaaniga iyo sida dowladda Talyaaniga ay u saacido dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. Sidoo kale waxuu uga mahadceliyey dadaalka ay u galeen sidii maalinta Jimcaha 23ka Sept uu u qabsoomi lahaa kulan gaar ah oo loogu tala galay in beesha caalamka iyo Qaramada Midoobay ay si gaar ah uga wada hadlaan arrimaha Soomaaliya si xal loogu helo arrimaha Soomaliya, dowladdana looga saacido sidii ay amniga iyo kala danbeynta u soo celin laheyd. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay in Talyaaniga uu ka dhabeeyey ballanqaadkii 1988 ee ahaa inuu deeq siin doono Soomaaliya, isla markaana uu lacagihii uu intaas u hayey ay maanta saxiixaan inay u soo deynayaan shacabka soomaaliyeed.
E-mail: [email protected] http://daljir.com/
“Arrin argagixiso weeye, arrintii dadka lagu jarayeyna weeye …laakiin waxaan aad uga xumahay ummadda oo aan weli ku baraarugin” Afhayeenka baarlamaanka Puntland.